Ku sawir bogag dhan 1 shaashad oo iPhone iyo iPad ah [Pro tip] | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Ku sawir bogag dhan 1 shaashad oo iPhone iyo iPad ah [Pro tip]
Ku sawir bogag dhan 1 shaashad oo iPhone iyo iPad ah [Pro tip]
Weligaa ma isku aragtay adigoo sawiraya sawirro badan markaad rabto inaad la wadaagto ama aad kaydsato dhammaan bogga internetka ee iPhone iyo iPad? Waxaa jira hab ka sahlan - khiyaano nadiif ah oo lagu soo qabto wax walba isla markiiba.
Waxaan ku tusi doonaa sida tilmaantan pro.
Waxaa laga yaabaa inaad taqaan sida loo keydiyo bogga internetka sida PDF ee iOS. Waxaa jira siyaabo badan oo loo sameeyo, waxaana ku haynaa hage ku saabsan taas haddii aad waligaa u baahan tahay. Laakiin xalka ugu fudud ilaa hadda waa in si fudud loo sawiro shaashadda.
Maya, maaha sawirro badan - hal sawir oo ay ku jiraan dhammaan bogga internetka ee hal PDF ah. Waxay qaadataa hal ilbiriqsi oo kaliya waxayna ka shaqeysaa yaabab labadaba iPhone iyo iPad. Waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo.
Ku keydi bogga internetka oo dhan hal sawir
Marka hore, ku shub bogga internetka ee aad rabto inaad ku qabato Safari ama browserka aad dooratay ee iOS, ka dibna raac tillaabooyinkan:
U qabso shaashadda sida caadiga ah adiga oo riixaya mugga ilaa iyo xoog badhamada qalabkaaga isku mar. ( Moodooyinka iPhone iyo iPad ka hore ee leh Aqoonsiga Touch, waxaad u baahan doontaa inaad riixdo mugga kor u kaca iyo badhamada Guriga.)
Marka sawirkaagu ka soo muuqdo geeska hoose ee bidix ee shaashaddaada, taabo si aad u furto tafatiraha.
Taabo Bog buuxa badhanka xaga sare ee tafatiraha ku yaal si aad u qabato dhammaan bogga internetka ee aad daawanaysay.
tubada Ku keydi PDF faylalka.
Magaca dukumeentigaaga oo sheeg goobta uu kaydinayo, ka dibna taabo Save.
Mareegtaada hadda waxa loo kaydiyay sidii PDF. Waxaad ku qeexi kartaa adigoo isticmaalaya Markup, la wadaagi kartaa adigoo isticmaalaya ku dhawaad ​​adeeg kasta oo farimo ah ama iimaylka ah, oo arag mar kasta oo aad rabto - xitaa marka qalabkaagu aanu lahayn xidhiidh xog.
Sida loo Maamulo Xisaabaadka iyo Cinwaanada Gmail-ka ee Badan ee Hal Sanduuq
Sida loo Sameeyo Xayeysiisyada Messenger-ka ee Facebook-ga si aad ah loo gujin karo (Tusaaleyaal lagu daray)